Zvakazarurwa 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
14 Zvino ndakaona, uye, tarira! Gwayana+ rimire paGomo reZiyoni,+ riine vane zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina+ vakanga vaine zita raro nezita raBaba+ varo rakanyorwa pahuma dzavo. 2 Ndakanzwa ruzha rwaibva kudenga rwakaita soruzha rwemvura zhinji+ uye soruzha rukuru rwokutinhira; uye ruzha rwandakanzwa rwakanga rwakaita sorwevaimbi vanoimba norudimbwa+ vachiridza udimbwa hwavo. 3 Vaiimba+ rwaiita sokunge kuti rwiyo rutsva+ vari pamberi pechigaro choumambo nepamberi pezvisikwa zvipenyu zvina+ nepevakuru;+ uye hapana akakwanisa kunyatsodzidza rwiyo irworwo kunze kwevaya vane zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina,+ vakatengwa+ vachibva panyika. 4 Ava ndivo vasina kuzvisvibisa nevakadzi;+ chokwadi, vakaita semhandara.+ Ava ndivo vanoramba vachitevera Gwayana pasinei nokwarinoenda.+ Ava vakatengwa+ pakati pevanhu sezvibereko zvokutanga+ kuna Mwari nokuGwayana, 5 mumiromo yavo hamuna kuwanikwa nhema;+ uye havana gwapa.+ 6 Zvino ndakaona imwe ngirozi ichibhururuka nepakati pedenga,+ uye yakanga iine mashoko akanaka+ asingaperi okuti izivise semashoko anofadza kune vaya vanogara panyika, nokumarudzi ose nemadzinza nendimi nevanhu,+ 7 ichiti nenzwi guru: “Ityai Mwari+ mumukudze,+ nokuti awa yokutonga kwake yasvika,+ naizvozvo namatai Iye akasika+ denga nenyika negungwa nezvitubu zvemvura.”+ 8 Imwe ngirozi yechipiri, yakatevera, ichiti: “Rawa! Bhabhironi+ Guru rawa,+ iro rakaita kuti marudzi ose anwe waini+ yokutsamwa youfeve hwaro!”+ 9 Imwe ngirozi yechitatu, yakadzitevera, ichiti nenzwi guru: “Kana munhu akanamata chikara+ nomufananidzo wacho,+ akagamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake,+ 10 iye achanwawo waini yokutsamwa kwaMwari inodururirwa mukapu yehasha+ dzake isina kuvhenganiswa, uye acharwadziswa+ nomoto nesarufa+ pamberi pengirozi tsvene nepamberi peGwayana. 11 Utsi hwokurwadziwa kwavo hunokwira nokusingaperi-peri,+ havana zororo masikati nousiku, vaya vanonamata chikara nomufananidzo wacho, nomunhu wose anogamuchira chiratidzo+ chezita racho. 12 Pano ndipo panoda kuti vatsvene vatsungirire,+ vaya vanochengeta mirayiro yaMwari+ uye vanotevera kutenda+ kwaJesu.” 13 Zvino ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti: “Nyora kuti: Vanofara ndivo vakafa,+ vanofa vari pamwe naShe+ kubvira panguva ino.+ Chokwadi, mudzimu unoti, ngavazorore pamabasa avo, nokuti zvinhu zvavakaita zvinobva zvaenda navo.” 14 Zvino ndakaona, uye, tarira! gore jena, uye pagore racho pakanga pagere mumwe akafanana nomwanakomana womunhu,+ aine korona+ yendarama mumusoro make nejeko rakapinza muruoko rwake. 15 Imwe ngirozi yakabuda munzvimbo tsvene yetemberi, ichishevedzera nenzwi guru kune uya akanga agere pagore ichiti: “Tanga kushandisa jeko rako, ucheke,+ nokuti awa yokukohwa+ yasvika, nokuti zvinokohwewa zvepanyika zvanyatsoibva.”+ 16 Uya akanga agere pagore akapinza jeko rake panyika, nyika ikakohwewa. 17 Uyezve imwe ngirozi yakabuda munzvimbo tsvene yetemberi iri kudenga,+ iyowo, iine jeko rakapinza. 18 Uyezve imwe ngirozi yakabuda muatari uye yakanga iine simba pamusoro pomoto.+ Yakashevedzera nenzwi guru kune iya yakanga iine jeko rakapinza, ichiti: “Pinza jeko rako rakapinza uunganidze masumbu omuzambiringa wepanyika,+ nokuti mazambiringa awo aibva.” 19 Ngirozi yacho+ yakaisa jeko rayo panyika, ikaunganidza muzambiringa+ wepanyika, uye yakaukanda muchisviniro chikuru chewaini chokutsamwa kwaMwari.+ 20 Chisviniro chakatsikwa-tsikwa kunze kweguta,+ ropa rikabuda muchisviniro chewaini rikakwira kusvika mumatomu emabhiza,+ rikayerera kwechinhambwe chemakiromita anenge mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu.+